Amaqela e-WhatsApp asebenzayo. Amaqela aphezulu e-WhatsApp?
Sonke siyacaphuka ukuba ngaphakathi amaqela e-whastapp apho kungekho mntu uthethayo nayiphi na into kwaye iintsuku zinokuhamba ngaphandle komcimbi okanye uluvo. Ngesi sizathu, apha sifuna ukuthetha amaqela e-whatsapp asethi.
1 Amaqela e-WhatsApp asebenzayo
2 Ungawafumana njani amaqela e-WhatsApp asebenzayo
2.1 1. Yenza iingxoxo-mpikiswano
2.2 2. Yabelana ngemifanekiso okanye iividiyo
2.3 3. Jonga ukwenza hangouts
3 Amaqela e-WhatsApp akhuthele kakhulu
Akunamsebenzi ukuba kwiqela le-WhatsApp elingasebenziyo nalapho kungekho mntu uphawulayo phantse. Kuyothusa kakhulu.
Ke ngoko, ngaphakathi grupomania.net siyathanda Yabelana ngamaqela eWhatsapp asebenzayo kuzo zonke iintlobo zemixholo kunye nemidla.
Singathanda ukukunceda ngokukunika uthotho lweengcebiso ngendlela yokwenza Yenza amaqela akho e-WhatsApp asebenze. Nazi ezinye iingcebiso.
Ungawafumana njani amaqela e-WhatsApp asebenzayo
Ukuba ukwiqela le-WhatsApp elimnandi kakhulu kwaye nalapho kungekho mntu uphawulayo, ngoko unezi ngcebiso ziliqela ukusebenzisa eli qela.
1. Yenza iingxoxo-mpikiswano
Indlela elungileyo yokwenza vula iqela le-whatsapp Kwenza iingxoxo-mpikiswano, ezinjengokuphakamisa isihloko, umxholo weendaba okanye umcimbi ucela izimvo zabathathi-nxaxheba kwiqela. Umntu ngamnye uya kunika umbono wakhe kwaye kuya kubakho ingxoxo-mpikiswano elungileyo eya kuthi ilusebenze iqela.
2. Yabelana ngemifanekiso okanye iividiyo
Indlela elungileyo yokujonga impendulo yabathathi-nxaxheba yeqela kunye nokugcina iqela livuliwe kukwabelana ngemifanekiso okanye iividiyo ngezihloko ezahlukeneyo ocinga ukuba zinokubangela impendulo kubathathi-nxaxheba, kodwa lumka, ungacaphukisi mntu.
3. Jonga ukwenza hangouts
Enye yeendlela ezisebenzayo zokusebenzisa iqela le-WhatsApp ngokulungiselela ii-hangouts ngokwakho. Ngale ndlela, ulindelo oluthile lokuqala luveliswa ngaphambi komsitho kwaye uninzi lwamagqabantshintshi ahlala enziwe kwiqela malunga nexesha ababekunye ngalo, imifanekiso, iividiyo, njl njl.
Amaqela e-WhatsApp akhuthele kakhulu
En grupomania.net uya kufumana Amaqela e-WhatsApp akhuthele kakhulu apho ungadibana nabantu kwaye wenze nabahlobo abatsha kunye App yeWhatsapp yeselula yakho.
Apha unokufumana amaqela e-WhatsApp asebenzayo avela kumazwe ahlukeneyo nakwizihloko ezahlukeneyo, umdla kunye nezinto ozithandayo.
Fikelela ngoku ku- amaqela e-whatsapp ukuqala ukukhangela amaqela asebenzayo anokukuomdla, kwaye ukuba iqela olikhangela alikho, zenzele ngokwakho kwaye wabelane nathi ukuze abantu abaninzi bajoyine ngokunqakraza ku Shicilela iqela le-WhatsApp.